Oduu Gaddaa Sadaasa 19/2014 – Welcome to bilisummaa
Oduu Gaddaa Sadaasa 19/2014
bilisummaa November 29, 2014	Leave a comment
Obbo Abdulaxiif Ahamed Sa`iid erga yaro dheeraa dhukkubaan dararaamaa ture sadaasaa 19/2014 ganamarraa sa`aati lamatti Hospitaala Joglaa Magaalaa hararitti Du`aan addunyaa kanarraa boqatee jira.
Sirni awwaalcha Isaas guyyuma kana waaree boda Aanaa Sibilu Araddaa Galmotti sirni awwaalcha isaa bifa miidhagaan raawwatee jira.
Obbo Abdulaxiif Ahamed sa`iid nama ganna 42ti.
kan dhalatee guddatees baha Oromiyaa Harargee dhihaa Aanaa Ciroo Araddaa Rukhelle ja`amutti dhalatee guddate.
Bulchiinsa Dargii keysaa biyyarra baqatudhaan Somaaliyaa Jibuutii Ertirea Yamen fii Sa`udii Arabiyaa keysatti baqattummaan jiraachaa ture.
Obbo Abdulaxiif ahamed sa`iid Abbaa ijollee Afuriti 4ti. Jolleen isaa baqattummaan Magaalaa Cairo keysatti jiraachaa jiru.
Dutii waan hin olleef Obbo Abdulaxiif Du`aan dhabuu kenyaaf heeduu gaddina.Sadaasa 19/2014 Du`aan Addunyaa kanarraa boqachuun isaa firaa fii Aalii isaa hunda gaddisisee jira.
Sirni gaddaa isaa Biyya Bakka dhalota isaa kan taate Rukhelle fii Riyaad ganda Manfuuhaa ja`amu Akkasumaasa Magaalaa Cairo ganda Ma`aadii ja`amu keysatti sirna miidhagaan gadgeyfamaa jira.
Nuus gama kenyaan Obbo Abdulaxiif ahamed Sa`iidif Araarama kadhachafii maatii fii firottan isaatif jajjabina hawwina.
Hegeree Oromiyaa sadaasa 19/2014
Tags Abdulaxiif Ahmed Hegereeb Oromiyaa
Previous Tarsiimoo Siyaasaa (Kutaa Qaraa)
Next ”Bareedde bareedde jennaan mucayyoon ija bobaafte jedhan”